साफ महिला च्याम्पियनसिप : बंगलादेशले भुटानलाई हराएपछि नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश - प्रशासन
जेष्ठ ९ गते, २०७६
काठमाडौं । नेपाल पाँचौ साफ महिला च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विराटनगरमा भइरहेको प्रतियोगितामा नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलअघि नै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। नेपाल महिला साफको सेमिफाइनलमा लगातार पाँचौ पटक प्रवेश गरेको हो।
नेपाल सम्मिलित समूह ‘ए’ अन्तर्गत बिहीबार भएको खेलमा बंगलादेशले भुटानलाई २–० गोलले हराएसँगै नेपालले अन्तिम खेलअघि नै अन्तिम चारमा स्थान पक्का गर्न सफल भएको हो। यसअघि नेपालले उद्घाटन खेलमा भुटानलाई ३–० गोलले पराजित गरेको थियो।
यता भुटानमाथि जित हात पारेको बंगलादेश पनि समूहको अन्तिम खेलअघि सेमिफाइनलमा पुगेको छ। लगातार २ खेलमा पराजित भुटान भने पराजित भएको छ।
अब शनिबार नेपाल र बंगलादेशबीच हुने खेल समूह विजेताका लागि हुनेछ।
साफ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले सुरुवाती तीन संस्करणको फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो। गत संस्करणमा भने नेपाल सेमिफाइनलमा रोकिएको थियो। सुरुवाती तीन संस्करणको फाइनल र गत संस्करणको सेमिफाइनल गरी चारै खेलमा नेपाललाई भारतले हराएको थियो। भारतले यसअघिका चारै संस्करणको उपाधि जितेको थियो।
प्रतियोगितामा समूह ‘ए’ मा नेपालसहित बङ्गलादेश र भुटान छन्। समूह ‘बी’ मा भारत, माल्दिभ्स र श्रीलङ्का छन्। प्रतियोगिताअन्तर्गत शुक्रबार माल्दिभ्स र श्रीलंकाबीच खेल हुनेछ।
फाल्गुन ३० गते, २०७५ - १८ः२७ प्रकाशित
साफ महिला च्याम्पियनसिप
बैतडीको पुर्चौंडीमा आगलागी, एकैघरका तीनजनाको जलेर मृत्यु
काठमाडौं महानगरद्वारा मेडिकल अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगी सम्म ४४ जना कर्मचारी माग
७० हजार अमेरिकी डलरमा क्यारेबियन लिग खेल्दै सन्दीप
जेष्ठ ८ गते, २०७६
बेलायती गोर्खाको समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ : थापा
स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न खानुस् दैनिक यी खाना
एचआईभी संक्रमित गोपालले गरे सगरमाथा आरोहण
प्रसूति र वीर अस्पताल पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा
आर्थिक समृद्धिका लागि सार्थक सहयोग जरुरी छ : अध्यक्ष दाहाल
सात अङ्कले बढ्यो शेयर बजार
‘म पदबाट राजिनामा दिन्नँ’, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार्छु : तामाङ
त्रिवी सेवा आयोग तत्काल खारेज गरियोस : सिपी गजुरेल
तपाईले बिक्री गरेको सवारी साधनको नामसारी गर्नु भयो ?
मानवजातिको हितमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग हुनुपर्ने : मुख्यमन्त्री राई
अध्यक्ष प्रचण्ड र बेलायती मन्त्रीबीच भेटवार्ता
विज्ञापनलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने : मन्त्री बाँस्कोटा
प्रधानसेनापतिद्वारा प्रकृति संरक्षण पदक प्रदान
१५ किलो चरेशसहित तीन जना पक्राउ
पाँचथर घटनाको सूक्ष्म छानबिन हुन्छ : गृहमन्त्री
विकास र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने कानून आवश्यक छ : गृहमन्त्री थापा
सुनको भाउ घट्यो, आज कतिमा कारोबार हुँदैछ?
१० सहसचिवको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ ?
४३४ स्थानीय तहका लागि ११३४६ दरबन्दी माग, लोक सेवा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा
जिसस कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक, प्रदेश र जिल्लासहित हेर्नुहोस् को कहाँ ?
यस्तो छ बैसाख १६ को राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ मर्यादाक्रम
गत साताबाटै सुरु हुन्छ भनेको लोक सेवा खोल्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ मन्त्रीज्यू ?
लोक सेवाको बाधा अड्काऊ फुकाऊ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित, विज्ञापन गर्ने तयारीमा आयोग
नेपालमा कर्मचारीको तलब किन बढाउनु पर्छ ?
रा.वा.बैंक लिमिटेड, चौथो र पाँचौ तह विशेष
[विशेष अन्तर्वार्ता] : फास्ट ट्रयाकका नाममा आयोगको ख्याति खस्किन दिइने छैन
अतिरिक्त वैवाहिक सम्बन्ध
देशको आर्थिक विकासमा सेक्युरिटी तथा पुँजी बजारको महत्त्व र भूमिका
रा.वा.वैंक लिमिटेड, चौथो र पाँचौ तह विशेष
न्यू क्यालेडोनियामा ६.८ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
फिलिपिन्समा कार दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु
मेक्सिकोमा धम्कीपछि एक पत्रकारको हत्या
वन तथा वातावरणसम्बन्धी दुई विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत
वनस्पतिको व्यावसायिकखेती आवश्यक : मन्त्री बस्नेत
२४ औँ वन्यजन्तु सप्ताह हुने
गैँडा मर्ने क्रम बढेपछि घाँसे मैदान र पोखरी व्यवस्थापनमा जोड
वन संरक्षण जनचेतना सप्ताह सम्पन्न
पत्रकारिता आवाजविहीनको आवाज हुनुपर्छ : पूर्वअध्यक्ष रेग्मी
हेटौँडामा डाटा सेन्टर सञ्चालन हुँदै
सरकारी सञ्चार माध्यमलाई साधन स्रोत जुटाउन पहल गरिने छ : मुख्यमन्त्री भट्ट
सिसी क्यामरा जडान गरिने
फेसबुकले भिडियो च्याट एप बन्द गर्दै